यस्तो अनौठा शौचालय देख्‍नु भएको छ ? (भिडियो सहित) | EuropeNepal.Net
यस्तो अनौठा शौचालय देख्‍नु भएको छ ? (भिडियो सहित)
एजेन्सी । संसारको सवैभन्दा महत्वपूर्ण वस्तुमा शौचालय पर्छ । हामीलाई खान जति जरुरत छ, त्यती नै आवश्यक त्यसको विसर्जन गर्नु पनि हो । तपाईले...
एजेन्सी । संसारको सवैभन्दा महत्वपूर्ण वस्तुमा शौचालय पर्छ । हामीलाई खान जति जरुरत छ, त्यती नै आवश्यक त्यसको विसर्जन गर्नु पनि हो ।
तपाईले पनि महशुस गर्नु भएकै होला शौचालय गएपछि पेट र दिमाग दुवैले आरामा पाउदछ भनेर । आज हामी तपाईलाई केही यस्ता शौचालय देखाउदछौ जुन क्रिएटिव मानिसले क्रियट गरेका छन् ।
देख्‍दाखेरी यी शौचालय एकदमै अचम्म लाग्छन् तर वनावट भने सानदार छ । हेरौ है त त्यी मानिसको अनौठा आविस्कार ।What if I told you I have found 10 of the worlds most amazing toilets? Would you think this blog is going down the pan! Well just for this post it ...
EuropeNepal.Net: यस्तो अनौठा शौचालय देख्‍नु भएको छ ? (भिडियो सहित)